Izindaba - UMBIKO WESIMO SE-COVID-19
I-coronavirus wuhlobo lwegciwane elivamile elibangela ukutheleleka emakhaleni akho, emathuneni, noma emphinjeni ongaphezulu.Ama-coronavirus amaningi awayona ingozi.
Ekuqaleni kuka-2020, ngemuva kokugqashuka kukaDisemba 2019 eChina, iWorld Health Organisation yahlonza i-SARS-CoV-2 njengohlobo olusha lwe-coronavirus.Ukuqubuka kwasakazeka ngokushesha emhlabeni wonke.
I-COVID-19 yisifo esidalwa yi-SARS-CoV-2 esingadala lokho odokotela abakubiza ngokuthi ukutheleleka komgudu wokuphefumula.Kungase kuthinte umgudu wakho wokuphefumula ongenhla (izono, ikhala, nomphimbo) noma umgudu wokuphefumula ophansi (uqhoqhoqho namaphaphu).
Kubhebhetheka ngendlela efanayo namanye ama-coronavirus, ikakhulukazi ngokuthintana nomuntu nomuntu.Amagciwane asukela kokuncane kuye kokubulalayo.
I-SARS-CoV-2 ingenye yezinhlobo eziyisikhombisa ze-coronavirus, okuhlanganisa nalezo ezibangela izifo ezinzima njenge-Middle East Respiratory Syndrome (MERS) kanye nesifo sokuphefumula esisheshayo (SARS).Amanye ama-coronavirus abangela imikhuhlane eminingi esithinta phakathi nonyaka kodwa engeyona ingozi enkulu kubantu abaphile saka.
Kuso sonke lesi sifo, ososayensi bebelokhu bebheke ngeso lokhozi okuhlukile okufana nalokhu:
I-coronavirus izohlala isikhathi esingakanani?
Ayikho indlela yokusho ukuthi ubhubhane luzoqhubeka isikhathi esingakanani.Kunezici eziningi, okuhlanganisa nemizamo yomphakathi yokunciphisa ukusabalala, umsebenzi wabacwaningi wokufunda kabanzi ngegciwane, ukufuna kwabo ukwelashwa, kanye nempumelelo yemithi yokugoma.
Izimpawu eziyinhloko zihlanganisa:
Ukugodola, ngezinye izikhathi nokuthuthumela
Ukulahlekelwa iphunga noma ukunambitheka
Leli gciwane lingabangela inyumoniya, ukwehluleka ukuphefumula, izinkinga zenhliziyo, izinkinga zesibindi, ukushaqeka kwe-septic nokufa.Izinkinga eziningi ze-COVID-19 zingabangelwa isimo esaziwa ngokuthi yi-cytokine release syndrome noma isiphepho se-cytokine.Kulapho ukutheleleka kubangela amasosha akho omzimba agcwale igazi lakho ngamaprotheni avuvukalayo abizwa ngokuthi ama-cytokines.Angabulala izicubu futhi alimaze izitho zakho.Kwezinye izimo, ukufakelwa amaphaphu kuye kwadingeka.
Uma ubona izimpawu ezinzima ezilandelayo kuwe noma kothandekayo, thola usizo lwezokwelapha ngokushesha:
Ukuphefumula kanzima noma ukuphelelwa umoya
Ubuhlungu besifuba obuqhubekayo noma ingcindezi
Ayikwazi ukuvuka ngokugcwele
Izindebe eziluhlaza noma ubuso
Ukushaywa unhlangothi kuphinde kwabikwa kwabanye abantu abane-COVID-19.Khumbula FAST:
Ubuso.Ingabe uhlangothi olulodwa lobuso bomuntu lundikindiki noma bushona phansi?Ingabe ukumamatheka kwabo kuphambene?
Izingalo.Ingabe ingalo eyodwa ibuthakathaka noma indikindiki?Uma bezama ukuphakamisa izingalo zombili, ingalo eyodwa iyacwila?
Inkulumo.Bangakwazi ukukhuluma ngokucacile?Bacele ukuthi baphinde umusho.
Isikhathi.Umzuzu nomzuzu ubala uma othile ekhombisa izimpawu zestroke.Shayela u-911 ngokushesha.
Uma uthelelekile, izimpawu zingavela ezinsukwini ezimbalwa nje ezi-2 noma ezifika kweziyi-14. Kuyahlukahluka kumuntu nomuntu.
Ngokusho kwabacwaningi baseChina, lezi kwakuyizimpawu ezivame kakhulu kubantu ababene-COVID-19:
Ukuntula isifiso sokudla 40%
Umzimba ubuhlungu 35%
Ukuphefumula kanzima 31%
Abanye abantu abalaliswe esibhedlela ngenxa ye-COVID-19 nabo banamahlule egazi ayingozi, okuhlanganisa imilenze yabo, amaphaphu, kanye nemithambo yegazi.
Okufanele ukwenze uma ucabanga ukuthi unayo
Uma uhlala noma uye endaweni lapho i-COVID-19 isakazeka khona:
Uma ungazizwa kahle, hlala ekhaya.Ngisho noma unezimpawu ezithambile ezifana nekhanda elibuhlungu nekhala eligijimayo, hlala uze ube ngcono.Lokhu kuvumela odokotela bagxile kubantu abagula kakhulu futhi kuvikela abasebenzi bezempilo kanye nabantu ongahlangana nabo endleleni.Ungase uzwe lokhu kubizwa ngokuthi ukuzihlukanisa ngokwakho.Zama ukuhlala ekamelweni elihlukile kude nabanye abantu ekhaya lakho.Sebenzisa indlu yokugezela ehlukile uma ukwazi.